1. Chii chinonzi Dianabol?
Dianabol (72-63-9) imwe ye androgenic-anabolic steroid ine mukurumbira mukuru pakati pevatambi uye varimi vemuviri pasi rose. Iyo yakawanda inoshandiswa nekunakira muviri uye zvinangwa zvekuita kuti zvive zvakakurumbira. Vamwe vevashandisi vanoreva steroid iyi se''kuru-daddy '' yemamwe steroids. Izvi ndezvikonzero zvemigumisiro yakakura uye yakakurumidza. Iyo hormone inogadzirwa muma laboratori uye yakabatana nehutume 'testosterone hormone chaiyo. Ichi chigadzirwa chinozivikanwawo nedzimwe mitsananguro akaita seMetanabol, Averbol, Vetanabol, Naposin, uye Dianabol.
2. Dianabol anoshanda sei?
Chikonzero chikuru che CIBA kuunza chigadzirwa ichi ndechekusimudzira kushanda. Ichokwadi kuti iyo iC17 steroid inoita kuti ichinje testosterone nekuwedzera kabhiri kabatoni. Somugumisiro, steroid inokwanisa kuramba kwenguva refu mushure mekutonga. The androgen ratings in Dianabol ranges between 40 and 60. Ichi chiyero chiri pasi peyero ye testosterone iyo inowanikwa pa100. Dianabol, zvisinei, ane simba rakaoma kana richiuya puroteni synthesis pamwe nekuchengetedzwa kwe nitrogen. Izvi zvinowedzera kugadzirisa nekugadzirwa kwemisungo mukukurumidza kunobatsira vashandi kuti vaone zviitiko zvinooneka pashure penguva pfupi yekushandiswa.
Dianabol (72-63-9) inewo unhu hwakasimba uye saka unogona kushandiswa nedzimwe steroid kuti uwedzere migumisiro yekugadzirisa maitiro. Kuti uwedzere kuvandudza kubudirira kwechigadzirwa ichi, unogona kuchiisa.
3. Dianabol anoshandisa
Dianabol (72-63-9) se steroid anabolic inozivikanwa nekwanisi yekuvandudza nzira yeprotini synthesis pamwe nekubatsira kuvhara amino acids mumasumbu. Inotora basa guru mukuchengetedza kweamino acids inenge iri mumusungo. Zvose zviri zviviri izvi zvinowedzera huwandu hweprotini mumasumbu. Somugumisiro, chigadzirwa chinobatsira pakuvaka masimba akaoma. Kuburikidza nemishonga inoshandiswa mune chigadzirwa ichi, mishonga inokwanisa kutora mamwe amino acids uye inoshandisa iyo kuyananisa kweprotini saka ichivaka mamwe musumbu.
Somugumisiro weprohormones uye yakakura anabolic makemikari akawanikwa mune chigadzirwa ichi, inoratidzika semumwe wemishonga yakasimba yekuvaka muviri mumusika. Izvi ndechokuti izvi zvinokonzera kuti chigadzirwa chive chakakosha uye chinogara kwenguva refu. Vashandi vemuviri vanogona kushandisa chigadzirwa ichi kwenguva yakareba sechigumisiro. Ichi ndechokuti maitiro akareba ane chigadzirwa ichi anoguma nemigumisiro yakanaka uye inobatsira. Izvi zvinoita kuti varimi vemuviri vadzivirire vakasimba uye musimba hwakasimba kunze kwekushanda kwemisumbu yakabudiswa ne androgens. Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate - Best Cutting Steroid
Dianabol inoshandiswawo mukurapa zvirwere zvakadai seArthritis, asthma, uye kenza yemazamu pakati pevamwe. Vanachiremba vanogonawo kushandisa iyi anabolic steroid mukurapa mavanga uye kukuvadzwa kwemuviri.it inogonawo kurapa varwere vanotambura nemamwe maitiro asingagoneki emakabheti akadai sekuparadza zvirwere uye kupisa. Inogonawo kushandiswa mukurapa kwepituitary dwarfism. Mukuwedzera, iyo inoshandiswa mumakemikirini emakemikirini evarwere vane chirwere chekenza.
Zvimwe kunze kwekugadzira muviri uye vatambi, Dianabol anozivikanwa zvikuru kune vanhu vanoenda kunotambira muviri vachitsvaka muviri. Vakawanda vevanhu vese vanogarawo vanoshandisa Dianabol kuti zvive zvipfeko. Dzimwe nhamba dzinoratidza kuti kushandiswa kwe steroid iyi nevakashambadzira vanhu vanoenda kupfuura izvo zvemitambo uye bodybuilders.
Vanhu vanotambura neHypogonadism vanogonawo kurapwa vachishandisa steroid iyi. Hypogonadism ndiyo mamiriro ayo varume vanotambura nehutsika hwe testosterone.
Sezvo steroid iyi inowedzera kuwedzerwa kweropa, vanachiremba vanogona kuishandisa kushandisa kurapwa kwemamiriro ezvinhu.
4. Dianabol dosage
Sezvakambotaurwa kare, hutungamiri hukuru hwe Dianabol huri mumhando yehwendefa. Mahwendefa acho kazhinji 20-25 mg. Zvisinei, kune mishonga inokwana iyo steroid. Steroid inoratidzwa nehafu yenguva-hupenyu. Izvi zvinoreva kuti kugadzirisa kwayo kwakaderera uye kuti iwe uwedzere kuchengetedza, unoda kutora zvakanakisisa Dianabol dosage. Iwe unogona kutora dhiyo nekuparadzanisa kwezuva nezuva. Vamwe vevarimi vemuviri vangave vari kutora mazamu vasati vadzidzira kana kudzidzira sezvo zvichivandudza zvidzidzo zvavo zvekudzidzira. Nzira iyi inoshandiswa nevakuru vemuviri vomuviri nekuda kweDhiyabhibol migumisiro.
Zvakakoshawo kushandisa nguva yakanaka ye Dianabol dosage. Semuenzaniso, varimi vemuviri vanogona kukurudzirwa kuti vatore dhigirii rinenge awa imwe chete vasati vaita basa. Paunenge uchishanda nachiremba, chiremba anogona kukubatsira kuti uwane nguva yakakwana zvichienderana nehutano hwako uye zvinangwa zvaunoda kuti uite.
Inokurudzirwawo kuti Dianabol image vanoters varambe vachiongorora mazinga e steroid muropa ravo. Izvi zvichavabatsira kuti vaone kuchengetedza kwavo uye hutano hwakanaka. Saka iwe unofanirwa kutevera mazano echiremba wako paunotora mapapanche akakodzera kana kuputika kubva pane imwe mikoko kuenda kune imwe. Uyewo, usanyanya kunwa doro uye sodium apo uri pasi peD Dianabol muyero.
Steroid yemuromo, Dianabol ane zvishoma zvakasiyana pazvinosvika pamatare uye Dianabol. Paunenge uchitsvaga kuti uwane zvinangwa zvakadai ne steroid iyi, zvingasava zvakakosha kuva neDielbol dosages. Ichi ndechokuti chigadzirwa chacho chakasimba uye chakasimba. Uine izvi mupfungwa, zvinotevera ndezvimwe zvema Dianabol madhairi ayo iwe unofanirwa kubhadhara paunotora ichi steroid:
· Dianabol dheji yevakatanga
· Dianabol dosage yevashandi vari pakati
· Dianabol kushandiswa kwevanoshandisa vashandi
· Dianabol dheji yevakadzi
5. Dianabol cycle
The Dianabol cycle inogona kuenzaniswa muzvikamu zvitatu sezvinodiwa. Izvi zvinosanganisira kutanga kwepakutanga, iyo yapakati uye yakatenderera mberi. Usati wapinda mune chero upi zvake, zvakakosha kuti unzwisise zviitiko zvinotarisirwa zvehupenyu. Izvi zvinonyanya kuvimba nechinangwa chako chikuru chekutora steroid. Saka zvakakosha kuchengetedza cheki pamatambudziko e Dianabol mumutambo pamwe nekureba kwenguva. Kana ukangosimbisa zvinangwa zvako, zvichava nyore kwazvo kusarudza nzira yakanakisisa kwauri pane chero nguva ipi zvayo.
· Vanotanga Dianabol cycle
Nepo kune vanhu vanogona kusarudza Dianabol chete mukufamba kwenguva, vamwe vanogona kusarudza kuwedzera kubudirira kuburikidza nekuiisa pamwe nemamwe steroid. Kana ukangotarisa pane Dianabol chete purogiramu, iwe unogona kuwana migumisiro munguva shomanana pane iyo yakaiswa pamwe nezvimwe zvinokurudzira. Zvisinei, kuregererwa kweA Dianabol chete kunogona kutungamirira kukurasikirwa kwaipo kwezvinhu zvakagadzikana. Kana ikaiswa, inogona kutora nguva kuti misumbu iende mberi kuti iite. Kurambidza kwepakati yakagadzirirwa kune nguva yakareba yekuchengetedza kwemisungo. Nevatangi vekutanga, vatangi vatsva vanotevera vanogona kushanda.
· Dianabol chete purogiramu
Izvi zvinowanzoitika kune vanotangisa avo vasina kumbove vakambosangana nazvo nesteroid stacking. Dhiabhorobol muyero weiyo mhirizhonga inogona kuva pakati pe20mg-30mg pazuva. Izvi zvinotora pakati pemavhiki mana nematanhatu. Vashandisi vari mumutambo uyu vanofanira kuchengeta kudya kwakakwana. Nhamba yacho inofanira kutorwa zvishoma nezvishoma kubva pasi kusvika kumusoro, ine nhamba yakanaka yemigumisiro. Kubudirira kwekuita izvi ndeyekuti zviri nyore kutevera uye zvine zvigaro zvishoma. Zviri nyore zvakare kutarisa mitsva pamwe nemigumisiro.
· Dianabol uye Test Sustanon
Apo kuisa Dianabol neTest Sustanon, chinhu chakakosha ndechekuita kuti mhepo inoramba iri nyore. Chiedza Sustanon yakakodzera seSteroid yekutanga yekubatana ne Dianabol sezvo inoderedza basa reHypothalamus-Pituitary-Testes Axis (HPTA).
A Dbol / Test Sustanon mhepo inogona kutarisa seyiyi:
Vhiki 1-4 Dianabol 20-25mgper zuva
Vhiki 1-12 Chiedza Sustanon 250-500mg pazuva
Mushure mokunge uchitarisana, iwe unofanirwa kutora mavhiki e2-3 kuti uputse kusvika kune iyo inotevera iwe unofanirwa kutora chirwere chemashure. Iwe unofanirwa kutora nolvadex dhigirii kwevhiki mbiri mu 40mg uye 20mg pazuva nekuda kwevhiki mbiri maererano.
· Dianabol + Trenbolone
Trenbolone inogona kuiswa pamwe ne Dianabol kuitira kuti ivandudze kukanganisa kwehutu. Kana ikashandiswa yoga, Dianabol acharamba achiunza kuwedzera kwekuvhiringidza. Zvisinei, zvinogona kuguma nekuchengetedza mvura sezvo isingacheki mafuta. Izvi zvinogona kukonzera migumisiro yakadaro semisumbu inoputika semasumbu akaoma akavharwa. Trenbolone inowanikwa ne Dianabol kuvandudza kudonha. Nzira inotevera inogona kushandiswa pane izvi:
Vhiki 1-12 Trenbolone 20mg mushure mezuva rimwe nerimwe rechipiri
Pashure pevhiki mbiri kupumha pakupedzwa kweizvi, chirwere chinotevera-cycle kubva muvhiki 17 chinofanira kutorwa neNolvadex zuva nezuva ye20mg / 20mg / 40mg kwevhiki mbiri. Mukuwedzera pakubvongodza, Dianabol nemotokolone stacking zvinoguma mumutumbi unononoka kutarisa.
· Dianabol + Deca Durabolin
Deca Durabolin ndeimwe yevanabolic steroids ine simba guru maererano nekubvongodza kwemasumbu. Iyi steroid inoshanda zvishoma nezvishoma nemazinga ayo inokura zvishoma nezvishoma. Mushure mekusiya Dianabol mukufamba, steroid ino inotora ichikubatsira kufambira mberi kwako mukuvaka musisi. Mune denderedzwa umo Dianabol akabatwa naDeca Durabolin, zvinokurudzirwa kuwedzera muyero Test E ezvo kuti iitevere uye kuchengetedza hutete hwakachengeteka hwe testosterone. Izvi zvinogona kutorwa nenzira inotevera:
Vhiki 1-4 Dianabol 20-25mg pazuva
Vhiki 1-12 Deca Durabolin 200mg pazuva
Vhiki 1-12 Test E 400mg kwevhiki
· Dianabol + Anvar
Aya maviri steroidhi, kana akatorwa pamwe, anogona kuwedzera hepatotoxicity zvinhu mavari. Somugumisiro, vanofanirwa kutorwa zvakasiyana kuti vatevedze simba rakaputika mumhepo. Zvinokurudzirwa kuwedzera kuwedzerwa kwevhiki yeE test E mu 500 mg kwevhiki. Izvi zvinogona kutorwa sezvinotevera:
Vhiki 1-2 Dianabol 20-25mg pazuva
Vhiki 1-12 Anvar 50mg pazuva
Vhiki 1-12 Test E 500mg kwevhiki
Kushandiswa kweperi-cycle kunofanira kuitwa pakati pe9th uye 11th vhiki. Ichi chirapa chinofanira kutorwa nezuva nezuva 200mg dhenda yeNolvadex.
· Pakati pe Dianabol mutambo
Pakati pepakati rinogona kutorwa kamwechete kana munhu ave akabudirira anotanga kufamba. Mumamiriro ezvinhu aya, mumwe angangowedzera mamwe mapoka emigumisiro yakawanda. Kushandiswa kwepakati kunogona kubva ku8 kusvika kumavhiki e14. Muenzaniso wehutenderedzwa wakadai unogona kutora Deca Durabolin, Dianabol uye Test Capionate nenzira inotevera:
Vhiki 1-6 Dianabol 20mg pazuva
Vhiki 1-12 Deca Durabolin 400mg pazuva
Vhiki 1-11 Edzai Kapionate 600mg kwevhiki
· The advanced Dianabol Cycle
Yakaenderera mberi yekutengesa Dianabol inogona kushandiswa nevashandi vakakurumbira kuti vawane yakawanda yemigumisiro. Izvi zvinenge zvakasiyana-siyana zve steroid zvinowedzera zvinogona kushandiswa pakutsvaga. Kusiyana nevatangi uye miviri yepakati, iyo yakamhanya inotanga kusvika kumasvondo e20. Inosanganisirawo kuwedzera masero. Izvi zvinotevera muenzaniso wekuenderera mberi kwe Dianabol:
Vhiki 1-6 Dianabol 100mg pazuva
Vhiki 1-10 Trenbolone Propionate 100mg kwevhiki
Vhiki 1-10 Deca Durabolin 500mg pazuva
Vhiki 1-10 Teat Ethantate 1000mg kwevhiki
Mimwe mitemo inowedzera iyo inogona kushandiswa mumutambo we Dianabol yakapfurikidza inosanganisira:
Test-Max (Test Ethantate)
Kubudirira kwechikonzero ichi ndiko kuti kunoguma mukuwana kukuru mukuvaka musisi. Zvisinei, izvi zvinogona kunge zvine ngozi kune vamwe vanhu uye zvinowanzova nemigumisiro. Nemhaka yepamusoro mazinga eesrogen ane chokuita nepamusoro dhiyo, vashandi vanogona kurairwa kutora inhibitor dzakadaro saAromatase Inhibitor.
Nokuti chero Diana wekushandura iwe uri kutevera, zvakakosha kuti munhu asungire purogiramu asingatori kudarika. Zvakakoshawo kuva nazvo mupfungwa kuti pane nzira dzakawanda umo kuvhara Dianabol kunogona kuitwa kunze kweiyo mapurisa ari pamusoro apa.
6. Dianabol migumisiro
Dianabol inofadza steroid wit kukwanisa kupa zvikomborero zvinoshamisa kana kutorwa nenzira yakakodzera. Inodawo kuti mushure mokunge utano huve hwakakodzera. Steroid inotora nguva pfupi pakati pe1-3 maawa kuti apinde muropa. Ndokusaka zvakakurudzirwa kutorwa maawa akawanda kusati kwashanda. Kuti uve nehutano hwakanaka hwekuita muviri we Dianabol, zvinonzwisisika kuti munhu anoramba ane kudya kwakakodzera uye purogiramu yekugadzirisa basa. Masteron Propionate kana Masteron Enanthate? Ndeipi iyo iri nani kwauri?
Vatangi vanogona kutarisira kuona zvimwe zviitiko zvinoonekwa sezvakaipfupi sekunge vhiki yekutanga yekufamba kwavo. Zvinokwanisika kuwana 4-7lbs mushure mevhiki yekutanga. Izvi zvichapawo kukura kwesimba. Izvi zvinogona kuitika muvhiki yechipiri kune vamwe vashandisi sezvo zvigumisiro zvisingaiti zvakafanana kune vose vanoshandisa.
Zvigumisiro zvingasimuka kusvika ku 8-12lbs mushure mevhiki yechipiri. Iyi mishonga ine uremu hukuru uye simba kana ichienzaniswa nemigumisiro yekutanga. Izvi zvinowedzerawo kubasa kwako kwekuita basa semugumisiro wesimba rinowedzera.
Nevhiki rechina re Dianabol dheji, kuchinja kwemuviri kunotarisirwa mumuviri wako. Nekudzidziswa kwakakodzera uye kudya kwakakodzera, unogona kutarisira kuwana pfuma kune 15-20lbs. Vashandi vakawanda vanosarudza kurega maitiro avo panguva ino. Izvi zvinokonzerwa nehutano hwemigumisiro yemigumisiro inosanganiswa nemadhora kupfuura iyi.
Vanhu vanowedzera kuwedzerwa kwechiremba vanotarisirwa kuti vawane zvinowanikwa zvinoshamisa. Somuenzaniso, pamusvondo wechisere, mumwe anokwanisa kuita zvakanyanyisa kushanda mune zvekurovedza uye anopedzisa zvose zvakagadzika kubudirira nekufara nyore. Pakupera kwevhiki, unogona kuwana 25-35lbs.
Kushandiswa kweDi Dianabol kunogona kuguma nokuwana uremu. Zvisinei, chiyero uye chiyero chekupfuma kunogona kugadziriswa nezvinhu zvakadai sekushanda kwako, kudya, sacked stteroed potency pamwe nezera rako.
Sezvo vakadaro, varume vanokwanisa kuenzanisa Dianabol wavo mberi uye pashure pezviitiko zvinoratidza zviitiko zvinoshamisa zvikuru. Izvi izvi zvisati zvaitika uye zvizoitika zvinogona kusanganisira kuwana varume kune avo vaimbove vaine ngozi, kana munhu ari murume pamberi pe Dianabol, mushure mekunge mitezo inogona kunge ine muviri wakagadzika apo avo vakanga vakapfeka miviri yakawanda vakawanda. Zvisinei, vanhu vakave vatotanga nheyo mukugadzira muviri uye vanotora maitiro makuru ekudzidzisa vanogona kuita izvi zvese nyore nyore.
· Dianabol madhara
Kungofanana nedzimwewo vana vanabolic steroid, Dianabol muviri bodybuilding tsika inoratidzwa nemamwe matambudziko. Iyi migumisiro yemigumisiro inogona kuchinjwa zvikuru neyero uye zera pakati pezvimwe zvinhu. Iyo migumisiro inogona kuva ine unyoro kana kunyange yakaoma. Heano mamwe emidzimu yaD Dianabol yaungatarisira paunotora Dianabol:
· Kutarisira Dianabol migumisiro
Nepo pane zvingava nemigumisiro yepamusoro inobatanidza Dianabol, izvi zvinokonzerwa nemigumisiro inonyatsokwanisa uye haifaniri kuva chigumbuso pakuzadzisa zvinangwa zvekuvaka muviri. Izvozvi ndeimwe nzira dzokuti idzi migumisiro yechirwere inogona kudziviswa:
Kutora zviduku zvishoma
Sezvakaratidzwa kare, vazhinji veMidhibhoboni migumisiro inokonzerwa nemadhora akawanda. Kuderedza kudyidzwa kwemasero akachengetedza kunoderedza mikana yevamwe madhigirii e Dianabol.
Kushandisa Aromatase inhibitor
Iyi inhibitor inoderedza mikana ye Dianabol kuputsa muestrogen pakupinda mumuviri. Kuwedzera yesrogen munhengo yemurume kunogona kukonzera zvimwe zvisingabatsiri zvakadai sekuwedzera kwemazamu.
Kushandiswa kwakakodzera kwe steroid
Nzira yakanakisisa yekushandisa Dianabol iri kutevera zvakanakisisa mirayiridzo inopiwa nachiremba uye kutevedza nguva yakakodzera. Izvi hazvizogadziri zvishoma kugadzirisa migumisiro asi zvinowedzerawo kuti Dianabol inowanikwa.
Dianabol maitiro anokwanisawo kukonzera kuderedzwa kwe testosterone kune vamwe varume. Mitumbi yavo mumatambudziko akadaro anoita kuti mitengo ye testosterone iwedzere. Izvi zvinogona kurapwa nokutora testosterone kuwedzera.
7. Dianabol hafu-hupenyu
Hafu yehupenyu yemishonga inoreva nguva inotora kuti muviri uwane chirwere ichi uye kubvisa kusvika kusvika hafu yemari yacho. Dianabol hafu-hupenyu mahara pakati pe2-3 maawa. Izvi zvinoreva kuti dhiabhorosi yeDy Dianabol inogona kutorwa mudiki madhara zuva rese kuti ivimbise kuwanika muropa. Izvozvo zvinogona kugoverwa zvikamu kana kane kana pazuva. Pamusana pezvikamu zvakasiyana-siyana zve steroid muropa, mushumiri anofanira kunzwisisa izvi hafu yeupenyu kuitira kuti nguva yakakodzera masero
Kana zvakadaro, iwe unosarudza kutora 20mg ye Dianabol zuva rega kwemavhiki mana, uchifunga kuti ine hafu yehupenyu hwemaawa mana, zvinotevera zvichava kuchinja kwekutengesa kwe Dianabol ropa:
Mumutero wakadaro, munhu angasarudza kuparadzanisa muyero muzvikamu zvina muzuva rimwe chete, saka inotora chirongwa che 5mg muzvikamu zvenguva ye4, kutanga pa 6 AM. Maawa mana mushure mokutanga, (10 AM), kuisa pfungwa kuchave kuri 2.5mg muropa. Izvi zvichamuka kune 7.5mg mushure mechipiri chemuti. Nenzira yechitatu, (2 PM) iyo yekutungidzirwa ichava pa 3.75mg iyo ichakwira zvakare ku 8.75mg mushure memutengo wechitatu. Ne 6 PM, kuchava 4.375mg. Izvi zvichamuka kune 9.75mg mushure mechina yevhesi. Mushure meizvi, huwandu huchaderera nehafu shure kwemaawa mana kuitira kuti ichange iri pa 4.875mg ne 10 PM, 2.45 ne 2 AM uye pakupedzisira pa 1.2mg ne 6 AM HRS apo inotevera inotorwa. Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Ndeupi Wins?)
Nenzira yakadai, munhu wacho anokwanisa kuve nechokwadi kuti kune nguva dzose inopa steroid muhurongwa. Izvi zvinoreva kuti kune chipo chakanaka kusati kwashanda, iyo inobva yanyora shure mushure mekuvhima nekutora imwe mubare. Zvisinei, kuchava ne 4mg ya Dianabol mumutambo pakati pekupedzisira muzana uye muzana wekutanga pazuva rakatevera. Zvose izvi hazvibatsiri.
Mune imwe nzira, munhu angasarudza kutora 20mg ye Dianabol paChmUMX PM asati ashanda paChmUMX PM. Saka pakati peusiku, mazinga ake achava pa 2mg, uye neyero inotevera, steroid ichabviswa zvachose mumutambo. Muchiyero ichi, munhu wacho ane zvakaderera zvakanyanya zve Dianabol mukati mezuva kupfuura pane yekutanga.
Mune maitiro maviri, pane kuchengetedza kwemazinga akakwirira e Dianabol panguva dzinokosha zvikuru dzezuva revashandisi. Izvi zvinoreva kukwana kwakakwana vasati vadzidziswa, panguva uye shure kwekudzidziswa.
Kuva neruzivo rwema Dianabol hafu yehupenyu naizvozvo zvakakosha zvikuru mukutungamira kwemazipa ako pamwe nekuita nguva. Izvi zvinokupa iwe kushandiswa kwakanyanya kwe Dianabol kwezvibereko zviri nani.
8. Dianabol Benefits
Izvozvi ndezvimwe zve Dianabol anobatsira kushamwaridzana ne Dianabol bodybuilding:
· Kuchengetwa kweNitrogen
· Wedzera maitiro e testosterone
· Kuwedzera kwekugadzirwa kwemasero matsvuku eropa
· Kuderedza kuneta
· Kukuru kunowedzera musimba masimba nesimba
· Mutsva maitiro
9. Dianabol Reviews
Pane humwe uchapupu hwekuti Dianabol ndeye uye anoenderera mberi kuva steroid yakanakisisa yevanabolic yepakati pemasangano ekugadzira muviri uye vatambi vemitambo. Vashandi vanofara vanogara vachida kugovana zvavanowana uye kugutsikana kwavanowana kubva kune steroid iyi Dianabol anoongorora. Mhinduro dzakanaka dzakapiwa nevakuru, vari pakati nepakati vashandisi vanoratidza kuti steroid iyi inonyatsovimbika. Heano mamwe emashoko mashomanana Dianabol kubva kune vamwe vevashandisi:
Keith: Keith akanga ave kwenguva achishandisa anabolic steroid kusvikira shamwari yake ikamuudza Dianabol steroid. Sezvo akanga ari mhirizhonga mukushandiswa kwe-steroids, akanga atovaka hutano hwakawanda hwemisungo panguva yaakazoendeswa kuna Dianabol.
Achinge arova chikwata chebasa nemashizha ake apfuura, Keith akanga achitsvaga chimwe chinhu kuti amupe mamwe akawanda mumasumbu ake. Aine mazano kakawanda kubva kuna chiremba wake, Keith akakwanisa kuzadzisa zvinangwa zvake zvakananga zvikuru ne Dianabol. Keith akambosangana nematambudziko makuru uye anovimbisa kupfuurira kushandisa Dianabol mukufamba kwake kuvaka muviri.
Jack: Jack akaendeswa kuna Dianabol kumushandi wake. Sezvo mutyairi webhazi, kunyange zvazvo aida kusimba, akanga asina vavariro yekuvaka muviri. Apo mukuru wake akamuudza Dianabol kwaari, aive achinyepedzera nguva yekutanga. Jack aiva nekutenda kuti steroid yakashandiswa chete pakugadzira muviri. Izvozvo zvakanga zvisina kudaro.
Mushure mokunge apedza dhiyabhorosi yake yekutanga, Jack haana chaaida kuchinja uye aive nemigumisiro yakaoma. Akanga ava kuda kupera apo mukuru wake akamuudza kuti aone chiremba wake. Chiremba akaziva kuti Jack aive achitora doro zvakanyanya uye kudya kwake kwakanga kusina kukodzera kutsigira rudzi urwu rwemero. Chiremba akabatanidzawo Aromatise Inhibitor muhupenyu hwake hunotevera.
Jack akatora imwe nguva, nguva ino iri kuongororwa nachiremba wake uye nekuwedzera kwe inhibitors uye mushure me-Cycle therapy. Akatanga kuwana zvibereko zvakanaka nevhiki yechina. Akakwanisa kuita zvidzidzo zvake nyore nyore uye akawana kutarisa kwemuviri wake. Jack anofara zvikuru nemigumisiro iyi uye anoronga kuramba achishandisa Dianabol kudzidzira kwake.
Anthony: Mushure mokunge avhuna musana wake mwedzi yakati yapfuura, Anthony uyo aiva nut mumitambo yekutamba asati atofanira kuenda kumitambo. Pakupedzisira, akatanga kuwedzera kuwanda mushure memwedzi umwe kusvikira apikiswa nemudzimai wake.
Anthony aifanira kutora tsvakurudzo kuitira kuti adzoke zvakanakisisa izvo zvinogona kumubatsira kuti adzorere mamiriro ake akapfuura munguva pfupi. Akazoona kuti mapurisa e Dianabol akashanda zvakanaka kuvanhu vakawanda. Anthony akasarudza kutenga zvinyorwa zve Diana Diana uye hongu! Yakashanda kwaari.
Pachine 4 Anthony ane nguva iri nyore mukushanda kwake uye atotanga kurasikirwa nemafuta makuru uye kurema. Anthony anofara zvikuru nemhepo iyi inotaura kuti aizokurudzira zvikuru chigadzirwa ichi kune shamwari.
Frank: Frank achangobva kupedza yake vhiki yechitanhatu ine chido chezuva nezuva che 40mg pazuva. Iye anofara kuti ave akawana huwandu hwe12lbs hwemasisita mashoma nekutanga kwake. Iye anofara zvakare kuti musikana wake akacherechedza izvi uye akayemura kutarisa kwake mutsva.
Frank akatevera zano rakanaka kubva kumudzidzisi wake wekurovedza muviri uye akachengetedza kudya kwakakura muhupenyu hwose, iyo yaanoti yakabatsira chaizvo mukubudirira kwake kukuru. Frank haana kumbova nemigumisiro nemutero wake pasinei nekusava nechokwadi pakutanga kwe Diana Diana.
Frank anonakidzwawo nesimba rakakura uye simba rakakura raakawana na Dianabol kumubatsira kuti aite basa rakaoma rinogona kugara kwenguva yakareba.
10. Dianabol inotengeswa
Kuva mumwe we steroid inonyanyozivikanwa yekuvaka muviri pakati pevarume vomuviri uye vaya vanoziviswa munharaunda yekuvaka muviri, Dianabol inotengeswa inowanikwa zvikuru pasinei nemakwikwi ekutanga ari kumisa kuburitsa kwechigadzirwa ichi. Munyika dzakawanda, ichiri kubudiswa pasi pemazita akadai seMethabol, Anabol, Naposim, uye Methadieone. Zvakakoshawo kuziva kuti Dianabol yave yakarongerwa seyakagadziriswa. Somugumisiro, inogona kunge isina mvumo kune dzimwe nyika iyo inogona kuwanikwa seyo pasi pevhu iro chigadzirwa kana kuti mishonga yechikwata chemishonga.
Mishonga yemishonga Dianabol inotengeswa inobudiswa nekambani dzeDAA dzakagadziriswa nemishonga apo Dianabol muumbi uye Dianabol mutengesi vanogutsa zvido zveDAA. Izvi zvinodiwa zvinotarisana nekukanda kwezvinhu zvakasikwa pamwe nekugadzirwa kwekugadzirwa. Aya anogona kunge ari nzvimbo dzakanakisisa dzekutenga Dianabol sezvo chigadzirwa chacho chiiswa pasi pekuedzwa uye chinotarisirwa saka chakakosha kuti munhu adye. Izvo zvakare zvepamusoro-soro hwepamusoro nokuti dzakatsigira sterility nekuchena. Itero steroids inotengeswa pamutengo wakareba zvakanyanya kupfuura pasi pevhu (UGL) Dianabol.
Kubva pasi pasi Dianabol, kune rumwe rutivi, anogadzirwa nevashambadzi vasiri izvo. Aya mabhiza akawanda anonyanya kugadzirwa mukugadzirwa kwevanabolic steroids. Ma laboratori akadaro angave ari mumba mumwe munhu, garaji kana pasi peimba. Kubatsira kunobatanidzwa nepasi pevhu lab Dianabol ndeyekuti inowanikwa muhuwandu hwakawanda uye inodhura zvishoma kudarika mishonga yemakemikari steroid. Zvisinei, kunaka uye kuchena kweizvi hazvisi nguva dzose. Icho chiri pamusoro pechisarudzo chomumwe munhu kuti atenge Dianabol kubva kune mutemo we Dianabol mutengesi kana mutengi kana kutenga kubva kumusika mutengo. Izvi zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu uye zvido zvake.
Kunyangwe iwe uchida kutenga girasi remishonga kana pasi pevhu Dianabol, zvigadzirwa zvinowanzotengeswa pamutengo wakaderera kupfuura dzakawanda zveimwe mhando dze steroid. Izvi zvinoita kuti zvive zvakakurumbira. Zvisinei, mutengo weD Dianabol kutengeswa hausi nguva yakafanana. Izvi zvinokonzerwa nekusiyana kwezvinhu zvakadaro mishonga yemishonga pamapiritsi (zvichienderana mg tablet, 10mg tablet, 50mg tablet etc), pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda. Kusiyana mumatengo pakati peGL Dianabol kutengeswa uye Pharmaceutical Dianabol haisiwo inoshamisa.
Imwe nzvimbo iyo iwe unogona kutenga Dianabol kutengeswa inobva pazvitoro zvekutsvaga. Kune mawebsite akawanda kubva kune Dianabol anotengeswa munyika yose. Zviri nyore kutenga Dianabol online sezvo zviri nyore kupfuura kubva kune dzimwe nzvimbo. Paunosarudza Tenga Dianabol online, nguva dzose inokosha kuti uve nechokwadi chokuti unotenga kubva kune imwe nzvimbo yepamutemo. Iwe unogona kutsvakurudza kuti uwane vatengesi vakakurumbira paIndaneti. Iwe unofanirwawo kuverenga kukosha kwaDeanbol kumakambani akadaro kuti uzive kuti vatengi vanonzwa sei pamusoro pavo. Izvi zvinokubatsira iwe kuti uone kuti iwe unongotenga zvakanakisisa zvese zve steroid.
11. Dianabol yekuvaka muviri- Summary
Dianabol anoramba ari iye anonyanya kunaka pakati pemasterodi anoshandiswa pakutsvaka muviri uye kuvaka muviri. Chibereko chacho chinouya nehuwandu hunobatsira maererano nemabasa ayo uye nzira iyo inoshanda. Inoshandiswawo kune zvimwe zvinangwa zvezvehutano kunze kwekuvaka muviri uye kufanana. Dianabol yekuvaka muviri inoda kutorwa muzvidimbu zvakakodzera kuitira kuti zviwanike zvakakwana. Vavaki vemuviri vanofanirwawo kunamatira ku Dianabol yavo yekuvaka muviri maitiro nemazano akawanda kubva kuvadzidzisi vavo kana vanachiremba.
Dianabol migumisiro nguva dzose inonakidza zvikuru kana mushonga wacho uchishandiswa zvakanaka. Izvo zvinokoshawo nguva nguva Dianabol dosages inobva pa Dianabol hafu yeupenyu. Izvi zvinoita kuti kushandiswa kunobudirira kwechirwere mumuviri.
Vanhu vari kutsvaka kutenga Dianabol vanofanirawo kuziva nezvekusarudza zviripo mumusika vasati vatenga. Izvi zvinosanganisira Pharmaceutical grade Dianabol, UGL pamwe nemichina inowanikwa paIndaneti. Kuita tsvakurudzo yakanaka nekuverenga mutengi Dianabol; Kuongorora kunokosha zvakare usati watenga Dianabol kutengeswa.
Nezvozvi mupfungwa, iwe une chokwadi kuti uwane zvakanakisisa kubva kuna Dianabol pakuvaka muviri.